"Last Call For Scholarships Applications!" – James Cook University Singapore | UNIVARSITY.ORG - &quot;Last Call For Scholarships Applications!&quot; - James Cook University Singapore
UNIVARSITY.ORG | "Last Call For Scholarships Applications!" – James Cook University Singapore
23 Mar "Last Call For Scholarships Applications!" – James Cook University Singapore
Posted at 11:18h in Scholarship University	by	admin0Comments
🚨 Last Call For Scholarships Applications! 🚨 (Contact: 09 5151008, 09 420099997)
🇸🇬 Singapore နိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်ရောက်ဖို့အတွက် စဉ်းစားနေကြတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ World Ranking Top (2 %) မှာ ပါဝင်ပြီး၊ Australia အစိုးရပိုင် တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ 👉 James Cook University Singapore 👈 ကို အားလုံး သိပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
🙋‍♂️🙋‍♀️ James Cook University Singapore မှ ပေးအပ်နေတဲ့ ပညာသင်ဆုများကို လျှောက်ထားလိုသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အခု “Last Call For Scholarships Applications!” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Live Interview Session ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
💁‍♂️💁‍♀️ “Last Call For Scholarships Applications!” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Interview Session မှာ James Cook University Singapore မှ ပေးအပ်နေသည့် ပညာသင်ဆုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး –
💢 ဘယ်လိုမျိုး ပညာသင်ဆုတွေကို ပေးအပ်သွားမှာလဲ။
💢 Application Deadlines အနေနဲ့ရော ဘယ်တော့လဲ။
💢 ဘယ်သူတွေ လျှောက်ထားနိုင်သလဲ။
💢 ဘယ်လိုမျိုး လျှောက်ထားရမှာလဲ စတဲ့ အချက်တွေကို ဝေမျှပေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
🙆‍♂️🙆‍♀️ ဒါကြောင့် Singapore နိုင်ငံရှိ၊ James Cook University Singapore မှ ပေးအပ်နေတဲ့ ပညာသင်ဆု (Merit Scholarships ) ကို လျှောက်ထားလိုသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် Applications Deadline မတိုင်မီ အမြန်ဆုံး လျှောက်ထားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျ။
👉👉 James Cook University Singapore ရဲ့ ပညာသင်ဆု အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်၊ တက်ရောက်နိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်များ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်များနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များကို သိရှလိုသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် STUDY ABROAD Information Centre ဖုန်းနံပါတ် 09 5151008 ၊ 09 420099997 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိင်သလို၊ SA Counselor – Messenger ကနေပြီးတော့လည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
💖သင့်ပညာရေးအတွက် ယုံကြည်အားထားရာ STUDY ABROAD Information Centre💖
🎯🎯🎯 STUDY ABROAD Information Centre သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် ပညာရေးများကို ဆည်းပူသင်ယူလိုသော မြန်မာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အတွက် အခမဲ့ အကြံပေးလမ်းညွှန်ပေးလျက်ရှိသော ပညာရေး အကြံပေးစင်တာကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ STUDY ABROAD Information Centre ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ STUDY ABROAD Information Centre သည် နိုင်ငံပေါင်း (၈) နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီးများ မှ တရားဝင်ခန့်အပ်ထားခြင်းကို ခံထားရသော ပညာရေး စင်တာကြီး တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
🎯🎯🎯 နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသော ပညာရေးတိုင်ပင်ခံများက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ တစ်ဦးချင်းအတွက် ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှု၊ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်မှု မှစတင်ပြီး၊ ကျောင်းဆောင်လျှောက်ထားမှု၊ ဗီဇာလျှောက်ထားမှု၊ လေဆိပ်မှ လာကြိုခြင်းတို့အတွက် စီစဉ်ပေးမှု စသည့်တို့ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ♥️♥️♥️
🎯🎯🎯 STUDY ABROAD Information Centre သည် UK ၊ USA ၊ Canada ၊ Switzerland ၊ Australia ၊ Singapore နှင့် New Zealand နိုင်ငံတို့ရှိ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားလိုသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများဖော်ဆောင်ပေးသည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာရေး စင်တာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံနဲ့ ကျောင်းတွေ က အများကြီးရှိတာမို့ သိချင်တာတွေကို ကြိုတင် လေ့လာနိုင်ရန် Website link – https://study-abroad.education/ ကိုပါ ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။ ♥️♥️♥️
😍😍😍 ဒါ့ပြင် ကျွန်မတို့ STUDY ABROAD Information Centre ၏ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ စကားသံများကို လည်း တစ်နေရာတည်း တွင် လေ့လာနိုင်ရန် – https://www.youtube.com/…/UCq…/playlists ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။ ♥️♥️♥️
😍😍😍 သင့်ပညာရေးအတွက် ယုံကြည်အားထားရာ STUDY ABROAD Information Centre သည် (၂၀၀၉)ခုနှစ်မှစတင်၍ မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများကို မှန်ကန်သော ပညာရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုများနှင့် ရာနှုန်းပြည့် စကောလားရှစ်များကို အခမဲ့ ကူညီလျှောက်ထားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ♥️♥️♥️